Fanaraha-maso Advanced Reputation ho an'ny mpivarotra mailaka | Martech Zone
Alatsinainy 2 Febroary 2015 Alakamisy, Septambra 1, 2016 Douglas Karr
Nanoratra momba izany izahay 250ok taloha ary manatsara ny tolotra fanaterana azy ireo izy ireo. Ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka lehibe dia tsy mahafantatra akory fa afaka manana isan-jato tena azo avoaka izy ireo, saingy mety tafapetraka ao anaty sivana SPAM ny mailaka ataon'izy ireo. Ny Deliverability dia midika fotsiny hoe nisy hafatra nalefa… tsy hoe nahatonga ilay boaty. Na dia lafo aza ny vahaolana hafa amin'ity habaka ity, 250ok dia vahaolana mora vidy izay manome fahaiza-manao bebe kokoa aza - ary ny fanambaràna androany momba ny marketing ny lazany mailaka dia mitaky fahitana iray hafa!
Reputation Informant dia manome ny fahitana sy ny fahitana ilainao hahalalana ny hetsika fandefasana hafatra amin'ny olana manerana ny renirano mailakao ivelany ary koa ny fanandramana phishing na fandefasana tsy nahazoana alàlana izay mety hanimba ny marikao. Fiderana tonga lafatra ho an'ny inbox sy fitaovana fanaraha-maso lisitra mainty, Reputation Informant dia manara-maso ny adiresy IP anao sy ny fonenanao ary manome ny antsipiriany ilaina mba hanaovana hetsika fanitsiana rehefa misy ny olana.
250ok mpiara-miasa aminay - ampiasainay izy ireo hanaraha-maso ny anay lazan'ny mailaka - ary ity fampiasa vaovao ity dia manolotra fitaovam-pitantanana laza roa miavaka amin'ny mpivarotra mailaka - ny fahaizana manara-maso ny marika manohitra ny mailaka hosoka sy ny fandrika spam.
Arovy ny marikao amin'ny Phishing, Spamming ary Spoofing
250ok Reputation Informant dia mamela ireo mpivarotra mailaka sy mpanome tolotra mailaka hanara-maso ny faritra misy azy ireo amin'ny fanandramana mailaka na phishing tsy nahazoana alàlana. Ny tatitra dia ahafahanao mahita hoe avy aiza ny mailaka hosoka - noravan'i IP sy ny firenena. Azonao atao ny mijery ny rohy hafatra ary mahita ny toerana ezahin'ny spammer hitarika ny mpanjifanao.
Arovy ny marikao amin'ny fandrika fandrika amin'ny mailaka
Tazomy ny lisitry ny mailakao avy amin'ny adiresy mailaka izay nampiana hamandrihana ny marikao ary hianjera amin'ny fandrika SPAM izay miteraka fahaterena na fanakanana tanteraka ataon'ny Mpamatsy Aterineto. Ny Reputation Informant an'ny 250ok dia mamela ny mpivarotra mailaka hahazo fahitana mitsikera ny hetsika mailaka ivelany ary hamantatra ireo olana misy fiatraikany amin'ny lazan'izy ireo.
Azonao atao ny manisa ny lisitry ny mailakao ary mahita mora ny IP, adiresy mailaka ary domains mandefa mailaka ratsy. Raha mpamatsy tolotra mailaka ianao, dia azonao atao ihany koa ny mahita raha manana ny fanamarinana sahaza azy (DKIM, firaketana SPF) ny mpanjifanao na tsia. Ny tahirin-kevitra rehetra dia azo aondrana any amin'ireo hafatra tsirairay.
Raha mandefa mailaka ana hetsiny isam-bolana ianao dia mety hamela vola be eo ambonin'ny latabatra amin'ny tsy fanaraha-maso ny lazan'ilay mailakao. Misorata anarana amin'ny demo 250ok amin'izao andro izao!
Tags: 250oklazan'ny mailakafitantanana laza malaza amin'ny mailakaphishingfanaraha-maso phishingamin'ny spamfandrika spam